Multizork: kuyeuka iyo yakasarudzika vhidhiyo mutambo weiyo 80s | Linux Vakapindwa muropa
Icculus yakatanga MultiZork, chirongwa cheiyo yakasarudzika vhidhiyo mutambo weZork kubva muna 1980 kuve nemultiplayer maitiro. Iwe unotoziva kuti mimwe mitambo yemavhidhiyo kubva makumi emakore apfuura anodzoka uye achiri mupenyu zvakanyanya. Kune vazhinji vevateveri vemitambo yekutamba, uye mumwe munhu (Ryan "Icculus" Gordon) aive nerakanakisa zano rekugadzira chirongwa ichi.
Ryan mutambi ane mukuru kuda Zork, mutambo unoshandisa wega chirongwa chemutauro uye CPU inoitwa neayo software kuti ikwanise kumhanya pane chero komputa. Izvo zvaizongoda chete Z-Machine emulator yekushanda kwayo, chimwe chinhu chaive nerubatsiro rukuru uko maPC aive asiri standard.
Zvakanaka, zvekunakidzwa, Icculus akanyora Mojozork, vhezheni yeZ-Mashini yakakwana kuti ikwanise kuita Zork 1 uye mimwe mitambo yeInfocom mune faira C. Kunyangwe ichiti zvinoita sezviri nyore, chokwadi ndechekuti zvakatora nhanho dzinoverengeka kuti ukwanise kumhanya Zork uye iite kuti ishande tsime, pamusoro pekuzviita mune yakawanda nzira. Mhedzisiro yacho ndeyekuti MultiZork inobvumidza vanhu vazhinji kutamba Zork kuti vaipedze.
Kana iwe usingazive Zork ane mukurumbiraIchokwadi ndechekuti waive mutambo wevhidhiyo kubva kuma80s aizochinja zvese. Iyi yekudyidzana yekunyepedzera franchise yakagadziriswa nekambani yeInfocom. Chikamu chekutanga chaidaidzwa kuti Zork 1: Huru Hwepasi Humambo. Kunyangwe hazvo chirongwa ichi chaiitirwa michina yeDEC PDP-10, ivo vaizochinjika kune akasiyana mapuratifomu uye masystem, uye prequels dzinoverengeka dzaizoburitswa.
Iri zita rekunamatira paMultiZork rakagadzwa zvese bhenji muiyo genre. Hupenyu hwekutaura uye hupamhi zvaive zvisina kujairika panguva iyoyo. Uye, kunyangwe iri yakavakirwa pazviitiko mune zvinyorwa zvinyorwa, chokwadi ndechekuti ichiri kukosheswa zvakanyanya nevamwe vatambi.
Unogona kuona mamwe mashoko nezve chirongwa chiri panzvimbo yako Patreon kana mune izvo zva GitHub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Multizork: kuyeuka yakasarudzika vhidhiyo mutambo wema80s